ကားရပ်နားကွင်းကို Long-အကွာအဝေး ID ကိုကတ်, Parking Lot Medium Distance ID Card, ကားရပ်နားကွင်းကို Long-အကွာအဝေး ID ကိုထူထပ်သောကတ်, Parking Lot Medium Distance Thick ID Card, Parking Lot Long-distance Thick ID Card, Parking Lot Medium Distance ID Thick Card
ကားရပ်နားကွင်းကို Long-အကွာအဝေး ID ကိုကတ်
EM ကဒ် / LF Card ကို ကားရပ်နားကွင်းကို Long-အကွာအဝေး ID ကိုကတ်, Parking Lot Long-distance Thick ID Card, Parking Lot Medium Distance ID Card, Parking Lot Medium Distance ID Thick Card
internal SEQ ID ကို NO:5bytes
Reading အကွာအဝေး: 1~ 3cm
0.7~ 1.2 မီတာ, ဝေးလံခေါင်သီစာဖတ်သူကိုတပ်ဆင်ထားခံရဖို့
Reading အချိန်: 1ဒေါ်
ကဒ်အရွယ်အစား: ပါးသော: 85.5× 54 × 0.84mm
စံထူထူးအိမ်သင်ကဒ်: 85.5× 54 × 1.05mm
အထူ: 85.5× 54 × 1.80mm
ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ: PVC, ကို ABS, ပေ, PETG, 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုး
ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို: လမိုင်း, Self-ကော်, ultrasonic encapsulation တွေကိုသေချာ
Parking Lot Medium distance / Long distance ID Card frequency is generally 125KHz. Now the market is mostlyapassive, unique serial number ID card, before the products leave the factory has this sequence number curing, မပြောင်းနိုင်ပါ. Long-distance ID card is to meet the long-distance read ID card internal serial number appearsatransitional stage products
1, အထူကဒ်: thickness 1.8mm, thick card can be sprayed withavariety of formats ID card number, screen printing LOGO, ပုံစံ, can printed stickers or other transparent color film.
Parking lot, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, အချိန်တက်ရောက်သူ, consumption, membership card management, sauna, ဖျော်ဖြေရေး, ကလပ်, and other fields.
prev: အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း TI Chip ကဒ်, 134.2kHz TI Chip ကဒ်
နောက်တစ်ခု: 18-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 10-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်, 8-bits ကုဒ် ID ကိုကဒ်